Antsirabe : nohetsehina ho matihanina ny mpanao asatanana | NewsMada
Antsirabe : nohetsehina ho matihanina ny mpanao asatanana
Par Taratra sur 09/11/2019
Fanomezana karatra vaovao ho an’ny matihanina izay lasa niomerika, ny anjara toeran’ny minisitera mitaha amin’ny an’ny mpanao asatanana, fanetsehana indray ny Tranoben’ny asa sy ny fahaiza-manao. Ireo no nanetsehana ireo mpanao asatanana tao amin’ny biraon’ny Sampandraharaham-paritry ny indostria sy ny varotra ary asatanana, Antsirabe, omaly.
Nandray anjara tamin’izany ny tale jeneralin’ny Asatanana, i Kajaly Dunest Audace Rabin; ny talem-paritry ny Indostria sy ny varotra ary ny asatanana, Vakinankaratra, Razafinimaro Jocelyn Richard; ny tale mahamatihanina ny asatanana, Rakotosata-Hamonjy Elia. Teo ihany koa ireo teknisianina avy amin’ny sampandraharahan’ny asatanana, ny teknisiana avy amin’ny Sampandraharaham-paritry ny indostria sy ny varotra ary asatanana any an-toerana.
Tombondahiny ny fananana karatra
Fantatra tamin’izany fa anisan’ny tombondahiny amin’ny karatra niomerika, ohatra, ny hahalalana ny tena mpanao asatanana, hahamatihanina azy ireo, hahazoana fanofanana, hanamora ny fandraisana anjara amin’ny tsenaben’ny asatanana, ny fahazoana fanohanana…
Nambaran’ny avy amin’ny minisitera mpiahy, afa-miroso amin’ny fifidianana izay ho mpikambana vaovaon’ny birao ny Tranoben’ny asatanana sy ny fahaiza-manao ireo mpanao asatanana. Manamora ny fitantanana ihany ny minisitera, fa ny lalàna 60-033 no mifehy ny Tranoben’ny asa sy ny fahaiza-manao amin’ny maha fikambanana azy.
Nomen-danja ny asatanana fa azo aparitaka, anaovana fanisana ny mpanao asatanana amin’ny maha zava-dehibe ny karatry ny matihanina. Azo lazaina fa fahombiazana ny fivoriana.